Minister Bartlett vanoronga kuzara kuzere kwea cruise indasitiri naGumiguru 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Minister Bartlett vanoronga kuzara kuzere kwea cruise indasitiri naGumiguru 2021
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Jamaica Gurukota Rezvekushanya Hon. Edmund Bartlett anoti zvichibva pane fungidziro yazvino anotarisira kudzoka kuzere kweindasitiri yezvikepe muJamaica pakati paAugust naGumiguru wegore rino. Izvi zvaanoona zvinoenderana neECVID-19 manejimendi uye yakawedzera muzana yevanhu vakabayiwa nhomba kuchitsuwa chose.
Kudzokororazve kwemaindasitiri echikepe muJamaica kunoenderana nematanho epamusoro ekudzivirira vanhu.
Gurukota rezvekushanyirwa Hon. Edmund Bartlett akaita chiziviso semukurukuri wekutaura pawebhu yeJMMB.
Bartlett akati vafambisi venyika vafambisi vechikepe vava kukwikwidza panguva yekudzoka muCaribbean mvura.
Minister vakaita chirevo panguva yeJMMB ye "Thought Leadership Webinar: munguva pfupi yapfuura, kwaaive mutauri wekutanga.
"Vatambi vedu vengarava vava kukwikwidza panguva yekudzoka mumvura dzeCaribbean. Nekudaro, kukura kwedu kwekugadzirira, kubva kuCOVID-19 manejimendi maonero, ndiko kunoratidza kuti vanokurumidza kupinda sei. Kubayiwa majekiseni ekudzivirira ndiyo zvirokwazvo nzou huru irimo mukamuri uye kune vazhinji vedu mudunhu, isu tiri akadzika kwazvo majekiseni ekudzivirira. "Tinofanirwa kuvaka izvi uye kuzviisa munzvimbo yekuona vanhu vakabaiwa majekiseni uye kuti vafambe mushe mushe," akadaro Bartlett.
Minister vakatsigira kuti zvichienderana nezvazviri kufungidzira, chitsuwa hachizoone kudzoka kuzere kwechikepe kusvika mukupera kwaNyamavhuvhu kusvika Gumiguru wa2021.
“Ini ndinofunga kuti Nyamavhuvhu kusvika Gumiguru muhwindo remwedzi mitatu iri ndipo pauchazoona kutangazve kwechikepe. Tinogona kuona imwe kana maviri madiki ngarava achipinda, pamwe muna Nyamavhuvhu. Nekudaro, kutora kwangu nyaya iyi Gumiguru kunoratidzika kwandiri mwedzi wekunze kwatiri kuti tione cruise ichidzoka mudunhu. Kana tikasazvidzorera panguva iyoyo, tinenge tave mudambudziko, ”akadaro Minister.
Bazi rezveKushanya rave richishingairira kudzoka kwechikepe muzhizha rino, ichishandisa nzira yekudyidzana iyo ichaunza kukosha kukuru kune vafambi, mitsetse yekufamba uye Kuenda Jamaica.
Nzvimbo dzinoverengeka dzakaongororwa mukukurukurirana nevafambisi vechitsuwa ichi, kusanganisira zvinongedzo zvine musoro, kufambiswa kwemisha, kufona kwakawanda, kuwedzerwa mabasa, kuwedzerwa kukosha kune zvigadzirwa zvemuno nekuvandudza ruzivo rwevatakurwi, izvo zvinofanirwa kushandurira mari yakakwira kune mumwe mufambi.
IMEX America Vanopinda Vanoita Run for Wellbeing